Qaramada Midoobey Oo War Ka Soo Saartey Xiisada Bariga Dhexe |
Qaramada Midoobey Oo War Ka Soo Saartey Xiisada Bariga Dhexe
Sucuudiga ayaa doonaya in jawaab “degdeg ah oo go’aan leh” laga bixiyo weerarradii dhawaan lagu qaaday maraakiibta saliidda ee gobolkaa marayey.
Wasiirka tamarta, Khaalid Al-Faalix, ayaa ka dardaar weriyey khatarta arintaasi ku yeelan karto shidaalka iyo suuqiisa dunidaba.
Khamiistii ayaa laba markab oo kuwa saliidda qaada ah lagu weeraray gacanka Cummaan, bilk a horna afar kale ayaa meel ka baxsan xeebaha Imaaraadka lagu beegsaday.
Maraykank ayaa arint ku eedeeyey Iran, hase yeeshee Iran way beenisay in ay wax lug ah ku leedahay.
Weerarradaasi waxay dhaceen iyadoo ay xiisadda labada dal dhex taal sii kooxgaysanays. Qiimaha shidaalkuna wuxu tan iyo dhacdadii Khamiistii kor u kacay 4%.
Maraykanka ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya ciidamo Iran-niyiin ah oo saxiimad yar saaran oo miino badeed aan qarxin ka fujinaya labada markab midkood. Laakiin caddayn muujinaysa in Iran ku lug leedahay weerarradii hore u dhacay may soo bandhigin.
Xidhiidhka Maraykanka iyo Iran ayaa sii xumaaday tan iyo markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump xilka la wareegay sannadkii 2027 ee uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iran cunoqabatayntana ku sii adkeeyey.
Xog-haya guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Gutteres, ayaa ku baaqay in ay lama huraan tahay in baadhitaan madax bannaan oo dhacdaa caddeeya la sameeyo.
Khilaafku ma aha wax dhex yaal Maraykanka iyo Iran oo keliya, waxa uu sidoo kale u dhaxeeyaa Iran iyo Sacuudiga oo ah laba quwadood oo kala mad-hab ah, khilaafka siyaasadeed ee dhex yaallaana saamayntiisa ku yeeshay dalal badan oo gobolka ah.